उत्तर कोरिया–अमेरिकाबीच गोप्य कुराकानी कसरी ? - Namaste Post
नमस्ते पोस्ट २०७४, ६ कार्तिक सोमबार ०२:५५ 0
उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच तनाव कायम छ । दुवै देशबीच आधिकारिक कुराकानी हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि, अमेरिका र उत्तर कोरिया अनौपचारिक कुराकानी भने अझै पनि गरिरहेका छन् । खुला मञ्चहरूमा यी दुवै देश एक–अर्काविरुद्ध अत्यन्त तिखा शब्द प्रयोग गर्छन् । यस्तोमा यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ कि पर्दापछाडिचाहिँ दुवै देशको अनौपचारिक कुराकानी कसरी हुने गर्छ ।
यसलाई थाहा पाउन केही वर्षपछाडि जानुपर्छ । मितिः २५ सेप्टेम्बर २०१३, स्थान : जर्मनीको राजधानी बर्लिन । उत्तर कोरिया र अमेरिकाका उच्चस्तरीय अधिकारीबीच एउटा ठूलो होटेलको रेस्टुरेन्टमा भेटघाट र कुराकानी भयो । यो कुराकानी निकै छोटो थियो, जसमा यी अधिकारीले एक–अर्काको पारिवारिक हालखबर पनि सोधपुछ गरेका थिए ।
बैठकमा को–को सहभागी थिए ?
यस बैठकमा सहभागी हुनेमध्ये दुवैतर्फका अधिकारी चिरपरिचित हस्तीहरू थिए । होटेलबाहिर निकै कडा सुरक्षा थियो । जुन रेस्टुरेन्टमा यो बैठक भएको थियो, त्यो यस्तो स्थानमा थियो, जहाँ यो बिल्डिङको बाहिरबाट देखिँदैनथ्यो । यस कुराकानीको सुरुवात डिनरबाट भएको थियो, जसको पछाडि दुवैतर्फका प्रतिनिधिहरूबीच कुराकानी भएको थियो । यस बैठकमा उत्तर कोरियाका प्रतिनिधि आफ्नो सरकारको दृष्टिकोण बुझाउने विषयमा अडिएका थिए । त्यहीँ अमेरिकी प्रतिनिधि यस कुराकानीबाट उत्तर कोरियालाई लिएर आफ्नो असमझदारीलाई सुल्झाउने कोसिस गरिरहेका थिए ।
दशकौँदेखि भइरहेका छन् यी भेटघाट
बर्लिनमा भएको बैठक त अनौपचारिक कुराकानीको एउटा उदाहरण मात्र हो । दशकौँदेखि दुवै देशबीच यस्ता भेटघाट भइरहेका छन् । जेनेभा, लन्डन र क्वालालम्पुरमा विगतमा दुवै देशबीच यस्तै कैयौँ भेटघाट भइसकेका छन् । यी बैठकलाई ट्र्याक १.५ भन्न सकिन्छ ।
यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि यसमा उत्तर कोरियाली सरकारका अधिकारी सहभागी हुन्छन् भने प्योङयाङको दृष्टिकोणबाट भन्दा यो ट्र्याक १ भयो । तर, अमेरिका कुराकानीका लागि शिक्षाविद् र पूर्वअधिकारीहरूको पनि उपयोग गरिरहेको छ, जसबाट यो ट्र्याक २ बन्न पुग्छ । ट्र्याक १ र २ बीच दुवै देश ट्र्याक १.५ मा कुराकानी गर्छन् ।
पछिल्ला केही महिनामा अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच दुस्मनी बढेको छ । कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव बढ्दै गएको अवस्थामा दुवै मुलुकबीच अनौपचारिक कुराकानी फेरि पनि हुनु आवश्यक छ ।
अबको कुराकानी कहिले ?
जानकारहरूको भनाइ छ कि पर्दापछाडिबाट गरिएका यी कुराकानी संकट समाप्त गर्नेतर्फको निकै राम्रो प्रयास हुन सक्छ । सबैको ध्यान अघिल्लो चरणको अनौपचारिक कुराकानीमा अडिएको छ । यो बैठक यसै साता मस्कोको एक स्थानमा हुन सक्छ । यस कुराकानीमा उत्तर कोरियाका तर्फबाट वर्तमान अधिकारी र अमेरिकाका तर्फबाट शिक्षाविद् र पूर्वअधिकारीहरू सहभागी हुनेछन् । बैठकमा अमेरिकाका तर्फबाट पूर्वसेक्रेटरी अफ स्टेट फर पोलिटिकल अफेयर्स वेंडी सेरमन, परमाणु वैज्ञानिक सिगफ्राइड हेकर र उत्तर अमेरिकी मामिलाका लागि उत्तर कोरियाका डाइरेक्टर जनरल चोई सुन ही सहभागी हुन सक्छन् ।
गोप्य भेटघाट : कहिले र कसरी ?
यस वर्ष उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच यस्ता तीन भेटघाट भइसकेका छन् । पहिलो भेटघाट जनवरीमा त्यतिखेर भएको थियो, जतिखेर भर्खरै ट्रम्प प्रशासन सुरु भएको थियो । कार्नेगी एन्डामेन्ट फर इन्टरनेसनल पिससँग आबद्ध डगलस पाल भन्छन्— मलाई लाग्छ कि उत्तर कोरियाली पक्ष डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपति निर्वाचनअघिको प्रचारमा बताइएका कुराकानीबाट चिन्तित थिए । जो ट्रम्पले उत्तर कोरियाको आणविक मुद्दालाई सुल्झाउने विषयलाई लिएर बताएका थिए । दोस्रो भेटघाट मे महिनामा भएको थियो । यो बैठक अमेरिका र दक्षिण कोरियाली सैनिकको संयुक्त भेटघाटपछि भएको थियो । प्योङयाङले यस अभ्यासलाई आफ्नो देशमाथिको आक्रमणको तयारी मानेको थियो । अर्को बैठक अगस्ट महिनामा भएको थियो ।
कुराकानीबाट सफलता प्राप्त हुन्छ त ?
यस्ता कुराकानीका भित्री सूत्रहरूका अनुसार यस्ता कुराकानी भइरहनु अति जरुरी छ । ताकि अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच कुनै अर्को देश आउन नसकोस् । उनका अनुसार यस्ता बैठकबाट यस्तो माहोल बन्छ, जसबाट अलग–अलग विचारमाथि कुराकानी गर्न सकिन्छ ।
(बिबिसी कोरियाली सेवाका लागि वासिङ्टनबाट)